49 gburu na alakụba abụọ na Christchurch New Zealand: Martin Vrijland
49 gburu na mwakpo ala abụọ na Christchurch New Zealand
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 March 2019	• 20 Comments
Dika mgbasa ozi si kwuo, 49 nwuru n'otu wakpo ala ala ala abụọ na Christchurch, New Zealand. Obi abụọ adịghị ya na a ga-agbanwe ọnụ ọgụgụ a n'elu. Nke ahụ bụ akụkụ nile nke ọgba aghara gburugburu ọrụ dị otú ahụ iji mee ka ndị mmadụ nwee ụjọ na ụjọ. Oge a ọ bụ ndị Alakụba 'na-abịa na mbuso agha. Esemokwu dị n'etiti ndị mmadụ dị iche iche na-arịwanye elu. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ na-ewe iwe ọkụ site na mgbasa ozi mgbasa ozi, nke na-anwa ime ka esemokwu dị n'etiti aka ekpe na aka nri n'ụwa nile, mgbe ahụ ọgụ ahụ ga-enyere aka.
"Mana Martin Vrijland, ị gaghị ekwu na ọgụ a bụ adịgboroja?"Adịghị m anwa anwa kwuo ya n'eziokwu. Naanị ihe m na-ekwusi ike ikwu bụ na mwakpo dị otú ahụ na-eme ka ndị mmadụ nwee ọnụ ọgụgụ dị iche iche megide ibe ha. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na ekpe na ndị otu dị iche iche ga-enwe ike iji ya mee ihe. Site na nkowa, mmegide dị otú ahụ chọrọ ka ndị uweojii na-agbakwu ndị ọzọ, ma dịka a na-akọ ya n'ụwa nile na mgbasa ozi, nwa amaala ọ bụla ga-enwe obi ụtọ ọzọ ka e weere ọtụtụ "mgbochi egwu". Anyị nwere ike nwee afọ ojuju ọzọ na PC anyị na-eji i-pads na smartphones na-eji data buru ibu na anyị nwere ike inwe obi ụtọ na ese foto niile na ọnụ ụzọ nchebe na-etinye ebe niile. Anyị ga-anabata ọnọdụ ndị uweojii anyị na-enwe obi ụtọ na afọ ojuju ọzọ!
Tupu anyị aga n'ihu ma kpee ikpe. Lelee ihe a ga-eji ike mee iji kpọọ ndị mmadụ na ụdị mgbasa ozi ma jụọ onwe gị: Ànyị nwere, n'oge a mgbe e nwere ụdị ọrụ dị iche iche nke ọrụ ntanetị, nwere otu foto nke ihe anyị nwere na mgbasa ozi? ịhụ mgbasa ozi ga-enweta obi ike?
Ọ dịghị ihe ọ bụla anyị hụrụ na TV kwesịrị ịbụ eziokwu site na nkọwa. N'ịkwenye na ihe akụkọ ahụ na-ewetara gị bụ 'eziokwu', ọ bụ ihe ọzọ karịa 'nkwenye' dabere na ntụkwasị obi. Ị tụkwasịrị obi na mgbasa ozi ga-egosi gị eziokwu ahụ ma gosipụta akụkọ ndị na-abụghị nke arụpụtara. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-ele ndị billionaires bara ọgaranya n'aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi, anyị nwere ike ịghọ ntakịrị ihe enyo. Ma anyị ga-ekwenye na pastọ nọ na chọọchị. Dị nnọọ ka onye nchụàjà na-emegbu ụmụaka. Anyị nọgidere na-atụkwasị obi na chọọchị ahụ. Nke ahụ ọ na-emetụtakwa mgbasa ozi?
Anyị achọghị ma ghara ikweta na ha nwere ike igosi anyị na anyị ga-eji ihe omume uche dị ukwuu na-elekọta ndị mmadụ na ntụziaka a chọrọ. Na ọdịdị, polarity na-eduga na ugbu a na ntụziaka a chọrọ; dịka batrị nwere gbakwunyere na obere osisi, nke ị na - emepụta ugbu a. Okwute elu elu nke elu ugwu (nke nwere mgbasa ozi n'ime akpa ya) nwere ikike niile na ya iji nyefee polarity ahụ. Ha choro "Pegida megide Antifa", na-ekpe aka nri, Onye Kraịst megide Muslim, na ihe ndị ọzọ. Idebe ụzọ a bụ ihe ndabere maka ọgba aghara na site na ọgba aghara ha na-emepụta ọhụụ ọhụrụ, nke ga-eme ka njikarị nke ike dị mgbe niile. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo)
"Ee, mana m ka na-ahụ ezigbo ajụjụ ọnụ na ezigbo mmadụ ndị na-ewute n'ezie ma na-anụ site na ndị ezinụlọ na ndị enyi ha na ha maara ndị nwụrụ na mwakpo dị otú ahụ". Anyị enweghị ike ịchịkwa ya niile. Ya mere, o nwere ike ịbụ eziokwu, ma ọ nwere ike dịka ọbụla adịgboroja. Ka e were ya na ọ bụ ọrụ uche iji mee ka ndị mmadu ghara ịdị na-ese okwu ahụ, mgbe ahụ i nwere ike ime nke a site na usoro ihe nkiri (AI, ihe ngwanrọ nke nwere ọgụgụ isi) ma ọ bụ naanị site n'aka onye ọkụ ọkụ na-ebute ọbara. O doro anya na mmegide dị otú ahụ dị adị ma bụrụ eziokwu. M na-agwa gị na ị gaghị enwe ike ịtụkwasị obi na ihe mgbasa ozi na-egosi gị. Na akụkọ ihe mere eme, anyị nwere ike ikwu na mgbasa ozi anaghị enwe ndekọ dị egwu.
Vidio dị n'elu na-egosi otú ị nwere ike adịgboroja ụdị ihe oyiyi niile na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ruo ọtụtụ iri afọ. Otú ọ dị, na ngwanrọ taa ị nwere ike ịga n'ihu ọtụtụ ugboro. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ihu ndị na-adịghị adị adị kpamkpam n'enweghị ihe ọ bụla (lee vidiyo mbụ n'okpuru). Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịjụ ajụjụ ọnụ ndị ahụ n'onwe ha, nke na ọ dị ka onye ahụ dị adị n'ezie. Ị na-eme nke ikpeazụ site na nhazi mmegharị ihu (lee vidiyo nke abụọ). Ị nwere ike iche n'echiche otu ị ga-esi jiri ngwanrọ ngwanrọ 3 gosipụtara ebe a iji duzie ajụjụ ọnụ n'okporo ámá site na ndị na-adịghị adị? Ị mepụtara onye na-adịghị adị adị (adịgboroja adịgboroja), jiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-etinye onye na-eme ihe ọjọọ ahụ ma jiri usoro mmegharị ihu ihu na-etinye ihu ọhụrụ na ihe nkiri. Ị nwere ike ịgbanwe ihu gị na olu ka ị detụ ire ma ọ dịghị mgbe ọ bụla ị nwere mkparịta ụka gbara ọkpụrụkpụ gbara ụka na onye na-adịghị adị adị akaebe dị nso na mwakpo ọjọọ na n'okporo ámá. N'eziokwu: ị nwere ike itinye ihe niile n'ozuzu. "Ee, ma e nwere ndị akaebe, ọ bụ eziokwu? E nwere ndị na-ekwu na ha maara ndị mmadụ? N'ezie, e nwere ndị uweojii na ndị ọrụ mberede niile dị ugbu a?"Maka nke a, ị nwere ma ọ bụ ihe omimi dị omimi nke mgbasa ozi ọha na eze na ndị ọzọ dị njikere ịnweta obere ihe maka 'mgbaru ọsọ ka elu'.
Ee, mbuso agha dị otú ahụ nwere ike ime n'ezie, ma gbaghara okwukwe m na pastọ, onye ụkọchukwu na ụlọ ọrụ mgbasa ozi adịghị oke ibu, ya mere, m na-agwa gị ihe omume ime mmụọ na-eme mgbe ihe mgbasa ozi ndị dị otú ahụ dị. Ị ghaghị ịma ihe ị kwenyere.
(Gụọ ihe ndị na-esonụ na ihe oyiyi nke égbè ebe a)
Nchikota New Zealand: nchikota nke ndi mmadu na ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu
Mma agha na ezumike mba "Le Quatorze July" iji mee ememe French mgbanwe
CIA's Charlie Hebdo ga-akpalite mmụba na "Muslim ụjọ" na ọhụrụ katuunu
Olee otú amụma amụma banyere Bill Cooper na Prince si pụta
Tags: agha, christchurch, alakụba, alakụba, ụlọ alakụba, New Zealand, egwu, ndị na-eyi ọha egwu, iyi ọha egwu, abụọ
Ahụrụ m vidiyo a site na ... amaghị onye onye isi iyi ahụ bụ, mana maka ndekọ ahụ
"Ọbara ahụ na-agbakwasị m ..." ka nwoke ahụ ji uwe ọcha kachasị mma na ihu dị ọcha karịa mgbe ọ bụla
Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta onye ọ bụla?
Ọ bụrụ na anaghị m emehie, Christchurch nọkwa na akụkọ ahụ afọ ole na ole gara aga. Amaghị m ihe kpatara ya. Enwere njikọ? Ikekwe ị nwere ohere ịlele nke a.
E nwere ala ọma jijiji n'oge na ụlọ dara ada ...
Ala ọma jijiji ọzọ:
Ọ na-adọpụ nke ọma site na ihe na-eme n'otu oge na ihe ndị na-achịkwa mgbasa ozi na-elekwasị anya na ...
Ha na-arụsi ọrụ ike ime atụmatụ atụmatụ Albert Pike.
Idd + ị nwere Ides gị nke March na-esote ụbọchị na-adọrọ mmasị bụ 22-3
M ghọtara na e jidere ọtụtụ ndị na-eme ihe ike dị ka ndị a na-enyo enyo. Na-eche ma ọ bụrụ na a ga-enwe ikpe ikpe ikpe ọha na eze nke ga-egosi ezipụta na ebumnobi. Ọ gaghị ekwe omume na otu ma ọ bụ karịa ndị na-enyo enyo na-agba ọsọ site na ọrụ nche ma ọ bụ onwe ha infiltrators. Ị na-ahụkarị na a tọhapụrụ onye dị otú ahụ ngwa ngwa nakwa na ị nakwaghị anụ ya.
Anyị agaghị achọpụta ma anyị ga-achọpụtakwa ma ọ bụrụ na ị nwere ezigbo 'ndị ọkàiwu' na ndị ikpe na New Zealand dị ka zomiland, Netherlands.
Ụgha ọkọlọtọ ọrụ site n'usoro SIS?
"Ọ dịghị onye nyere m iwu ka m buso m agha, m na-eme mkpebi n'onwe m. Ọ bụ ezie na m kpọtụrụ nnabata Knights Templar a mụrụ maka ngọzi na nkwado nke mbuso agha a, nke e nyere. "
Enweghị m anụ ihe ọbụla gbasara Boeing 737 Max ọzọ, olee otú nke a ga - esi bụrụ? O yiri ka onye ọ bụla chọrọ ichebe Boeing na ndị nwe ya.
N'oge a, ọ dị mfe ikpocha ebo niile. Ha na-eme otu ihe ahụ, ugbu a, ọ dị ngwa ngwa.
Na Urk ị na-ahụ otu akụkọ ahụ, onye ntorobịa bụ Onye Kraịst nke a na-etinye na njedebe kachasị na ihe niile ga-esi na ya apụta. Mwakpo a na-eme na NZ na-akwalite mmetụta ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-aghọta na anyị na-egwu na-etinye ha na otu igbe dị na mgbasa ozi dị ka onye a na-eme.
Ọ dịghị onye na-enwe ọganihu ma ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ alakụba dị n'Australia iji gbaa ndị Alakụba, ọ dịghị ụka Krismas ka mma. Maka na ọ bụ ọgụ Christchurch na ndị Alakụba. Dị nnọọ ka Urk enyi na enyi na-ekwu na ọ bụ ndị Moroccan. Kedu ka ị ga-esi nweta ngwá agha dị ukwuu n'igbe gị na mba ebe a debanyere ngwá agha niile?
Aha nke columnist ### Elfie ### el- ọbụna (obere ala) ụda = trump = ụda ga-niile dakọtara.
Ọ bụrụ na m gụọ niile nzaghachi ahụ ọtụtụ na-edu site faiks ###
Ebee ka nwatakịrị ụbọchị ọmụmụ 28 na-enweta ego iji buru ụzọ gaa Europe ma gaa mba dị iche iche n'ebe ahụ iji nye echiche ya na ịkpọasị. Mgbe ahụ, nwa nwoke a nwere ike ịnweta ndụ ruo ọnwa ole na ole na Dunedin, ghọọ onye so n'òtù ịgba égbè wee gbazite ụgbọala ka ọ rụọ ọrụ ya? Kedu ka onye dị otú ahụ si enweta kaadị akwụmụgwọ.
Ihe na-egbochi m oge kachasị bụ oge n'agbata égbè abụọ ahụ. Anụrụ m 11 nkeji na 7 nkeji. Ebe dị anya site na 6 kilomita, mana ị gụrụ site na ụlọ alakụba mbụ ahụ n'ụgbọala ahụ, ebe dị anya, ebe ụgbọala na-adọba ụgbọala na ụlọ alakụba ọzọ ga-ezuru oge a. N'ihi na m bi n'ebe a onwe m, achọrọ m ịga n'ụzọ taa. N'ụzọ dị mwute, a na-emechi ọtụtụ ụzọ gburugburu ụlọ alakụba nke akpa égbè. Ka o sina dị, n'oge izu a, m chọrọ ịnwa ọzọ iji hụ ma elee 6 kilomita a n'ime 7 nkeji (n'ehihie Friday).
Mmasị! Na-agwa anyị ..
Ihe dịkwa iche bụ na na vidio ahụ na igwefoto ahụ n'isi ya, ọ na-agbanye mmadụ niile ma na-agaghachi ịkụgharị ọzọ iji jide n'aka na ha anwụọla n'ezie. N'ụlọ alakụba ọzọ, e nwere ọtụtụ ndị merụrụ ahụ, ọtụtụ n'ime ha na-ese foto ma na-anọdụ na igwe ha. Ọ dị m ka ị ghara ijide ekwentị gị n'ọnọdụ dị otú a. Ị na-aga enyere ụmụnna gị aka, nri?
Enwere ike iji usoro mgbasa ozi na-eme ka ị bụrụ onye mbụ ịkọ akụkọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ọ bụ banyere ndụ mmadụ (ndị nwere ezinụlọ, wdg).
Ihe mebiri m:
- isi mmalite nke akụkọ (mgbasa ozi ndị ọzọ, PM, wdg) Ị ga-atụ anya na ndị uweojii na-enye ozi gbasara onye ndị ahụ metụtara na ndị ọzọ.
- ọnụ ọgụgụ nke ndị gbanwere gbanwere n'ọnọdụ dị oké njọ. Ndị nwụrụ anwụ karịa ụzọ merụrụ ahụ.
- foto na akpụkpọ ụkwụ
- "Ndị ọchịchị ekwenyeghị na ọ bụ onye ọ bụla, n'ihi na ọ ghaghị ịbịa n'ụlọikpe na Saturday, ọ ka na-echekwa na ọ bụ eze."
- 'E jidere Xranto afọ Brenton Tarrant na ebubo na igbu mmadụ (28 hour Saturday NZ oge)
- "A chọpụtakwara na ndị na-agbawa mgbawa na-ejikọta otu ụgbọala ma ọ bụ karịa." (?)
- "Minista Minista Jacinda Ardern ekwesiri ike na mbụ na nnọkọ mkparịta ụka na onye na-agba égbè nwere ihe mgbaru ọsọ" (obere oge)
- Ọ ghaghị ịbụ nnukwu ọbara ọbara ... ọ bụghị n'ụzọ doro anya anya
- "Onye ụkọchukwu nke New Zealand, Jacinda Adern, mereghachiri n'egwu. O kwuru banyere "ụbọchị ojii" na enweghị obi abụọ: nke a bụ onye na-eyi ọha egwu. " (emeghi okenye maka PM)
- "Dị ka òtù ndị Siria si kwuo, ọ dịkarịa ala, 1 Siria nwụrụ." (isi ihe di iche)
- "A ga-enwekwa ọtụtụ ụmụaka n'ime ndị ahụ metụtara. Dị ka akụkọ mbụ si kwuo, nke a na-emetụta ụmụaka Siria. '(ịkọ nkọ, ọ bụghị gị?)
- 'Ụmụ ya malitere ịchọta ego iji zoo nna ha na Afghanistan. '(n'oge na-adịghị anya)
- "Dị ka otu akụkọ sitere Bangladesh na BDNews24.com si kwuo, e gburu ya onwe ya n'oge mwakpo ahụ. "(isi iyi)
- "Dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Saudi Arabia Al Arabiya si kwuo, Mohsen al Muzaini meriri mmerụ ahụ ya. "(isi iyi)
- "Nwa nwoke ọzọ nke Khaled ka na-efu." (ọ bụghị na ụlọ alakụba, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ akọwabeghị?)
... ma n'eziokwu, ọ dịghị echegbu ndị niile na-anwụ site n'ọrịa na ọrịa na-egbochi. Enweghị ozi ọzọ ...
Ihe m ghọtara bụ na onye na-eme ihe ahụ bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka Knights Templar (Freemasonry) na ọ ga-ekwu na ọ bụ naanị ndị ole na ole n'ime nzukọ ya bụ ndị Serbia (ndị agha). Onwe m, echere m na ọgụ maka Kosovo (n'ihi esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge na-adịbeghị anya) nwere ike ịdaba na ọnwa ndị na-abịanụ.
" Kpọọ ngwa ngwa!
Foto vidiyo nke onye na-agba egwu Brenton Tarrant (ndụ iyi) Christchurch New Zealand »
Nleta nile: 11.677.881
President Osama op Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ!